NOQOSHADDA Wanka EE 2016! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Ilaah One, One Earth, Mid ka mid ah Dadka.
Baybalku wuxuu inoo sheegayaa in Ilaah « waa » iyo in uu abuuray koonkan, dhulka iyo nin.
Sida laga soo xigtay kalandarka Hebrew waxaan lahaa sannadkan 2016, ka 5777 th sano ee abuuridda Dadka by Ilaah.
Maxaa la galin uu ka hor sayniska dacayadeed-caddayn by baafinta aadanaha ka badan hal milyan oo sano.
Inta taariikhda, Kitaabka Quduuska ah nin waxaa la baray in ay sii thread this of union u dhexeeya Ilaah iyo aadanaha.
Waxaa hoogtay, ninkii halkii uu ku dhow inay Ilaah by waxbariddan ayaa sii waday in ay ka guuraan.
Inkastoo cilmiga Kitaabka Quduuska ah, qalad badan ayaa ka soo baxay in ka badan taariikhda aadanaha. Waxaa jiray caabudilahaa qorraxda, dayaxa iyo ilaahyo khayaali spooky. Ragga ayaa xitaa jeclaa sida ilaahyo in tusaale ahaan ka mid ah Fircoon ka.
Laakiinse ninkii dunida casriga ahaa sii cay in ay Ilaah! Nin ayaa si fudud u diiday in ay abuure ama nin ka xun u dhaqmo sida haddii Ilaah ma jiraan.
Sidaas daraaddeed, Ilaah ma aha joogo maanka Aadanaha oo casri ah, ninkii wuxuu bilaabay inuu riyooda in ay noqdaan wax ilaah ah.
France inkastoo Clovis iyo Joan of Arc, ayaa sii waday in ay caro Ilaah taariikhda (xasuuqii of Brotestanka on St. Bartolomayos, raadinta saaxirad, xarig iyo dil ah Templars iyo Jeanne oo dhan arc iwm ..) iyo France ayaa ugu dambeyntii Ilaah daayay gobolka intii lagu jiray 1789 kacaanka.
Republic ayaa doonayay inuu Ilaah uga noqdeen nolosha ee France ee 1789 la wado, waana arki halkaas oo ay ugu dambeyntii u horseedaa.
227 sano ka dib, France waa duntay, duulay iyo hanti tireen uu hantida by duulay dacayadeed-nabadeed kuwaas oo ah kuwa waxaa lagu soo dhaweeyay sida weyn, caawiye, hoy, quudin, daryeelo xor ah oo xitaa lacag bil kasta canshuurta our!
Oo weliba Faransiis ah ay u badan tahay in ay ku noolaadaan « faqri »inkastoo shaqo ah inta badan xanuun iyo xamuulka more culus on miisaaniyadda yar qoyska, « belaayaysan » marka dhuftay by shaqo la’aanta.
In ka fariistay at ugu xumaa fiican ee aan sugnayn iyo murugo ay yihiin ka dib markii inta badan nolosha dheer oo shaqo u xanuun badan.
Dadka Faransiiska in lagu canbaareeyo oo cambaareeyay xumada iyo murugo faa’iido u ah, kuwaas oo qalaad ee soo duulay oo ay lagu qasbay by dawladaha in ay wada noolaadaan.
Tani set nool waxay leedahay qiimaha iyo waa dadka Faransiis yaa taageero si xanuun weyn « Cashuurta, canshuurta, lacagta iyo qarashka mar walba ayaa ka muhiimsan, halka waxtarka bulshada hoos si heer ah in dadka Faransiiska ay ku adag tahay weyn ee daaweynta.
Madaxweynaha François Hollande ayaa xitaa, ugu yaraan kitaabkii uu-sayidaddeedii hore, caayay dadka uu iyaga magacaabay: « The badhitaan ».
hadal Tani ceeb, ceeb, dulleeya iyo aflagaado habase yeeshee waa laga fekerayo ah oo xaqiiqada, maxaa yeelay, waa run in Faransiis ah si fiican u ma bogsiin kara.
Kharashka daryeel-caafimaadeedka ilkaha iyo ilko sanaaci ah inta badan waa loo badheedhi Karin in dadka ku nool saboolnimada iyo murugo, oo ay dhab yihiin inta badan u khuduuca badhitaan.
By kuwaas daaweynta iyo ilko sanaaci ah xor u tahay, kuwaas oo dhan qalaad ee soo duulay!
Waxaan Masiixiyiin fahmaan in ay tahay maqnaanshaha Ilaah nolosha France nagu soo hor kacay si xaaladan apocalyptiga.
Iyo inuu inoo fahmaan, Ilaah doonayay kuwan « soo duulayaal » shisheeye waa ka diin arooryadow « Islam. »
Sida aan maalin kasta arki aanu ku nool nahay jeer dhamaadka iyo soo laabashada ay la Rabbigeenna iyo King Ciise Masiix ku dhamaan doonaa.
Waxaan rajo weyn in this soo laabto bisha September ama bisha October 2016
Laakiin waa in aan aqoonsado in aan hore khalad ahay iyo waxaan meesha kama saarayso karaa in waqtigan aan weli qalad ahay.
Waxaa hoogtay, waxaa laga yaabaa inaan u leeyihiin in ay sugto dhowr sano ee soo celinta Rabbiga.
Laakiin waxaan rajo ma aha, maxaa yeelay, xanuun la bilaabay (waa la dafiri karin) oo ay dhufan ciidamada weyn tan iyo 29 September 2008.
Waxa kale oo aanu ognahay in ay ka sii dari doonaa kordheysa inuu ku soo laabto ee ammaanta Ciise Masiix tan iyo markii uu ka soo laabtay waa in ay ahaadaan sida in xanuunkii foosha.
Sidaas xanuunka waa horumar iyo ka sii dari kartaa oo keliya ka badan!
Haddii sanadkan 2016 Ciise Masiix soo laabtay, ugu dhakhsaha badan loo sii daayay aan doonaa, kuwaas oo dhan xanuun nolosha. Sidaas awgeed waa lagama maarmaan in ay weli ku jira wadaagis la leh Ilaah Salaadda weydiisanaya denbi dhaaf maalin kasta, dembiyadayada, khaladaadkii aan galnay, khaladaadkii aan galnay, xumaanta iyo fikirradooda our Caa’isha.
Waxaan leenahay nolosheena muujiyo noo qiyamka Christian by caawiyo kuwa na weydiiso caawimaad ay ka mid yihiin soo duulay, kuwaas oo dhan.
Laakiin sidoo kale waa inaan difaacanaa dhaqanka, taariikhda, qiyamka iyo dalka France.
Fiiro gaar ah in aan ku odhan, waayo, France shaqeynayaa dal kasta oo Europe waxaa soo galeen sida haddii luqadaha, sheekooyinka iyo dal way kala duwan yihiin, our iimaanka Christian waa caadi.
in aan caddeeyo in ay tahay daciifnimo ee Dawladaha noo dhiiri dadyowga oo dhan in qax aan iman kaliya ka Syria, laakiin ka soo adduunka oo doondoonaan nolol wanaagsan ee Europe iyo gaar ahaan France.
maalmood ugu danbeysay ee ka hor soo laabashada Ciise Masiix la qeexidda ugu adkaa ee aadanaha noqon doonaa. Waa in aan si xoog leh u duceeyaan wax kasta in la sameeyo sannadkan, 2016.
Taasi ayaa ka dhigeysa waqti aad u yar in la keeno tirada ugu weyn ee u khuduuca in Masiix xagga baabtiiska.
Waxaa sidoo kale laga yaabaa in loogu talagalay baabtiis in la bixiyaa iyadoo dhammaan muhaajiriin in Ilaah iyaga ku jiro Europe diray. Sidaas daraaddeed ha ka cabsan in ay soo gudbiyaan baabtiis in dadka weydiin tahay caawimada oo dhan.
Ka feker in haddii Ilaah doonayay in, aan ayaa laga yaabaa in meesha oo dhan qoysaska tahriibayaasha.
Remain khushuucsan oo Ilaah ugu mahad naqayaa, waayo, jacaylka in libta inagu inkastoo dembiyadayada, khaladaadkii aan galnay, khaladaadkii aan galnay, xumaanta iyo fikirradooda our Caa’isha.
Hoogay, haddii Ciise Masiix yahay mid gaabis ah ku socda oo uu ku soo laabtay ka dib, si aan u helno doonaa dhibaato wayn ee 2017.
Tani waxay noqon doontaa doorashadii madaxtinimada ee France iyo mid kasta in uu niyada tegi doonaa in ay u codeeyaan musharaxa ee ay doortaan.
Waa in hase ahaatee waxaad ogaataa in Republic waa hooska keligeed iyo Xukunka ayaa la baabiiyo iyo lacagta.
The saameynta iyo saameynta ay France ee dunida sii kordheysa périclitent tan iyo General De Gaulle.
Haddii aan waxba laga qaban in si joogto ah loo joojin lahaa oo noqonaynin duulaankii, in sannadaha soo socda uu noqon doono laga tirada badan yahay dadka Masiixiyiinta ah Faransiis iyo Republic haddii ay weli jirto, laakiin ma aha cilmaani iyo Qur’aanku isbedel tani waxay noqon doontaa sida dimoqraadiga ah ee doorashada.
Mas’uuliyiinta ayaa mamnuuc ah in runta dadka kula hadlo. Sidaas tirooyinka ma rasmi ah ka jiraan tirada Faransiis Muslimiinta laakiin qof kasta ka arki kartaa in magaalo kasta, xaafad walba in bulshada Islaamka waa sii kordhaysa muhiim ah in France iyo Yurub.
In cad, muhiimadda ay leedahay bulshada waa dhacdhaco!
Taageerada doorashada kuwan siyaasadaha caajisaan ee socdaalka Islamic iska dhaqaaqi doono ka Faith, Masiixiyada iyo Ciise Masiix.
Garsooraha iyo xukumi muhaajiriin kaloo ka dhaqaaqi doono ka Faith, Masiixiyada iyo Ciise Masiix.
Laakiin ha iloobin samafal bilaabma layska oo ka mid ah waa in aan si gaar ah.
Sidaas daraaddeed wax alla wixii go’aamo ah saraakiisha la doortay sameeyey oo dhan, kuwaas oo galay muhaajiriinta, waa in aan loo xaqiijiyo in go’aamada lagu dabaqo jacayl iyo samafal Christian.
Isla mar marka nin gaaloobay, isagoo leh « humanists » waxay ka badan ka walaacsan qaddar ee dadka kale sida ay aayahooda iyo qaddar ee naftooda jira.
Sidaa darteed waa badan tahay in doorashada madaxtinimada, wax kasta oo statements doorashada iyo ballamada ka dib, qulqulka guureen sii wadaan in ay xaaqin guud ahaan Yurub iyo gaar ahaan France.
Isla sababaha had iyo jeer soo saaraan saameynta isku mid, in Islaamiyiinta waxay ku jireen bariga, waxay samayn doonaa in Europe.
Sidaa darteed Violence, dagaal sokeeye iyo dagaal diimeed sida xaqiiqada ah qubuuraha doonaa gadaal qadhaadh doorashada madaxtinimada Faransiiska ka dib. Haddii aadan ka hor !!!
In dunida ah, halkaas oo Pope isaga qudhiisa ayaa laga badiyay iimaanka kor u ah in la aqoonsado Diimaha oo dhan sida runta ah iyo sida waddooyin loo maro Ilaah, sidaa darteed waa la fahmi karo in badan oo ka mid ah walaalaha kuwaas oo u dhawray macnaha dhabta ah ee rumaysadkiisa waxaa lagu sii kordheysa xaddidan.
Waxa kale oo xaddidan sii our xorriyadda. Si dhakhso ah waxaan haysan doonaa xorriyadda inuu canaanto falalka ka dhanka ah oo dhan naga iimaanka Christian, kaniisadaha our iyo rabshadaha on walaalaha ee France iyo inta kale ee adduunka.
Sidaas daraaddeed walaalahayga aan jeclahayow wiilal iyo gabdhoba, ayaan qoray laba buug oo albaabka ugu horeysay ee horyaalka ee magaca blog ah. « Wacdiyuhu wuxuu of Return of King ee » iyo sabtaytal« From gudcurka yimaado nuurka » Kitaabkan qaybta hore waxay daliil jiritaanka Ilaah iyo sharaxayaa sababta uu curiyay badan oo ninkii iyo waxa ay noqon doontaa qaddar ee kuwa doortay in ay raacaan doonista Ilaah. Qaybta labaad ee buuggan ku jira qaar ka mid ah articles aan ayaan ka fikiray oo muhiim ah oo badbaadin xiritaanka macquulka ah ee blog ka dhanka ah inaan doonistayda.
Buugga labaad ee horyaalka « France, ilbaxnimada iyo Republic ka dambeysa » oo ay cinwaan labaad waa « The noqo Wacdiyuhu Boqorka »sharxay qaybta hore sida aan Dhagartay iyo in la qiyaamay line sheekada fatidiquement si aad u hesho nafteena dhamaadka waqtiga ku addoonsiga. Waxa kale oo uu sharaxayaa sida France bixi karin of this RUT, « laabto oo ka mid ah King of France, » haddii ay ku laabashada Ciise Masiix waa in lagu sameeyo a sano ee yar. Qaybta labaad ee buuggan kale oo ku jira qaar ka mid ah articles aan sidoo kale ayaan ka fikiray muhiim ah in la badbaadiyo xiritaanka macquulka ah ee blog ka dhanka ah inaan doonistayda.
Wax kastoo dhaca, soo celinta ah oo Rabbigeenna Ciise Masiix yahay for our Qarni, waa xaqiiq ah buuxda! Oo waxaa uusan u oggolaan hooska shaki!
Laakiin Kitaabka Quduuska ah ayaa sidoo kale waxa uu inoo sheegayaa in markii Ciise Masiix iimaanka runta ah ku soo laaban doonaa ayaa laga tirtiray Dhulka.
Sidaas xitaa haddii aan ku qanacsan dhaw ee soo celinta iyo promptness Rabbigeenna Ciise Masiix, waayo, sannaddii 2016 ahay, xaqiiqda ah ay weli tahay in aan laga yaabaa inuu khalad iyo in labada buugaag dhab ahaan ku caawin doona maxaa yeelay, Ilaah keliya ogyahay waxa cadaawayaashooda awood Faith.
Waxaan u aragnaa oo daya in tan iyo 2008 kiristaanka ayaa degay jahannamada geli lahaa. Walaalaheenna iyo gabdhaha waxaa dunida oo dhan lagu dilay warheynta guud ee saraakiisha la doortay. Waxaan ka heli in Islam la dagaallameen reer Nasaarada.
September 27, 2015 Pope Francis ayaa xitaa beeniyay Ciise Masiix ee Cathedral St. Patrick ee Maraykanka, oo u dhiganta cadayn rasmi ah oodhimasho kaniisadda Catholic by Pope Francis, kuwaas oo ka dhigay mar hore diiday sifooyinkii shaqada le’daan markii loo magacaabay March 13, 2013.
Waxaan ka heli in mar ka badan maraa, in aanu « Masiixiyiin ah » waxaa si gaar ah oo ku riday dekedda ah.
maalmood mugdi ah ka hor, sidaa darteed waxaan go’aansaday inaan qoro laba buugaagta in waxtar leh si ay u diyaariyaan shirarka caqli ama qarsoodi ah by lagama maarmaan ah sida dadka Masiixiyiinta ah ee hore u ahaan doonaa ama xitaa aad aaso karaa oo mar kale ilaa laabashada Rabbiga.
Rajeynaya, si kastaba ha ahaatee, in this ma loo baahan yahay iyo in waqtigan waa wanaagsan yahay iyo in Ciise Masiix yahay si dhab ah dib sanadkan 2016 bisha September ama October, waxaan u malaynayaa in oo ku beegnaa Iiddii turumbooyin dhexeeya 03 iyo October 4.
Waxaan sharaxay in blog ee usbuucii la soo dhaafay dhammaadka kitaabiga ah waqtiga, muddo toddoba sannadood la sii sheegay by Nebi Daniel qaar ka mid ah 600 oo sano ka hor ugu horeysay soo socda Ciise Masiix.
Markaasaa toddobadii sannadood ee la soo dhaafay in la xiro dhammaadka wakhtiga, waxaa u sugnaaday Caddibaadda Ilaah. Waxaa la sheegay in wax sii sheegidda in this muddo todoba sano ka kooban yahay laba jeer saddex sano iyo bar ah iyo in inta lagu guda jiro saddex sano iyo badh labaad, xanuunka ay noqon doontaa wax badan sii dhalaal.
Sida aan ku dhawaaqay in aan article soo laabashada Ciise Masiixu 14 AMA 15 September 2015 THE! Wakhtiga iidda buunan soo laabashada Ciise Masiix lahaa in ay soo fara dhamaadka toddobadii sannadood oo dhib, bilowgii waxaan ku yaalaa ilaa 29 September 2008 ka dib markii shil suuq ee Wall Street sababtoo ah ciidanka waa in la ogaado in tan iyo markaas calaamooyinka oo dhan ku meelsha iyo waxsii of laabashada Ciise Masiix ka dhacayo xoog iyo magnitude iyo aad u badan.
The soo laabtay Rabbigeenna lahaa in ay soo fara in September ama October 2015. Oo weliba waxaan oo dhan ka helay in ay ahayd qalad ah.Laakiinse xanuunka ahaa dhab ah oo sii kordhaya tan iyo 29 September 2008.
baadi The Waxaan qabaa inaan by ma tixgelinayo in wixii nebiyadii ku xusan sannadood oo laba jibbaar saddex iyo badh ka dhigay.
Waxaan ugu dambeyntii fahamsan yahay in haddii wax sii sheegidda sheegay sannadood oo laba jibbaar saddex iyo badh waa waqti dhintay inta u dhaxaysa labada muddo saddex sano iyo badh.
Muddada hore ay ku dhamaatay March 2012 by calaamad weyn oo samooyinka oo la iska indho nasiib siday ahayd munaasab ahayn oo lama filaan ah, video af Isbaanish.
Qaybta labaad ee saddex iyo badh bilaabmaa my opinion la magacaabidda Pope Francis 13 March 2013 iyo waxaa cad in xanuun uu sii socon doono iyo sii dari sii kordheysa ee dhammaan goobaha.
Saddex iyo badh ka dib March 13, 2013 Nooga keeno in September 13, 2016!
Sidaas, waa in aan dhicin inuu qirto. Falanqaynta of dhammaan calaamadaha iyo waxsii sheegista ku xusan Kitaabka Quduuska ah in uu ku dhawaaqo laabashada Ciise Masiix ayaa shaaca ka qaaday liiska dheer ee dhacdooyinka ee dhammaan noocyada in aanu ku nool yihiin on Earth.
Masiibooyinka, dhulgariir, dababka, roobab karar ah, duufaanada, Harikayntu, Baxniintii, cudurrada faafa, abaaro, rabshadaha, dagaallo iyo dagaallo hadalhayntood, argagixisada, luma qiimaha, dhimasho xad-dhaaf ah ee kalluunka, shimbiraha iyo duur-joogta iyo xoolaha oo aan sharaxaad maalin kasta nolosha ka mid ah caalamka iyo aadanaha.Dhacdooyinkaasi waxay ahaayeen wax sii sheegeen in uu ku dhawaaqo laabashada Sayidka iyo King, Ciise Masiix ina Ilaah oo keliya oo soo socda inuu boqor dhulka intii kun sannadood ah in ay yimaadaan ilaa Qiyaamaha.
Haa qalaad sida laga yaabaa in ay u muuqato waxaan laga yaabaa in ay yihiin oo ku saabsan in uu la kulmo our abuure.
Waxaan doonayaa in aan ka taxadarnaa iyo malaha dhihi iyo galiyo inaan anigu ahay weli waxaa laga yaabaa in hal mar ku suganyihiin baadi.
Waxaan nin nebi ah oo aad ogtahay oo sidaas oo kale ayaan lahayn ceeb in uu qirtay in uu noqon karaa qalad ah ma ihi. Si kastaba ha ahaatee, haddii Ciise Masiix inoo reebin calaamadaha waa in la sameeyo noo eegto oo ay sugaan inta na siiyo, xoog iyo rajada lagama maarmaan ah in ay ka gudbaan dhibaatooyin la xiriira dhammaadka wakhtiga.
Taasi waa warka wanaagsan ee laabto Rabbigeenna.
Laakiin aad ka fekeri karto in haddii uu jiro war wanaagsan, sidoo kale waxaa jira war xun.
Warka ugu horeysay xun waa in bilaha soo socda waxaa ay noqon doontaa xun adag sida aynu u horseedi aad ugu dhow in ay maalinta laabashada Ciise Masiix iyo in maalmaha ugu dambeeya uu noqon doono ugu adkaa. Waxay noqon doontaa markii ugu of maalinta cadhada Ilaah.
Sidaas darteed waa mid aad u muhiim in bilaha soo socda si aad u dadaala salaadda, weydiisanaya denbi dhaaf iyo in toobaddii. Ka dib markii si ay goori goor tahay !!!
The news labaad xun yahay in aan sameeyo ma garanayo haddii rayrayn kaniisadda u noqon doonaa at daqiiqadii ugu danbeysay ama waqtiga maalinta cadhada Ilaah hortiisa.
U soo ducee walaalahayga aan jeclahayow oo walaalahoodii gabdhaha si laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix ma aha lacagta dib, sababtoo ah xanuun uu noqon doono ka badan dulqaadan karin for badan oo inaga mid ah.
Si kastaba ha ahaatee waxaan laga yaabaa in in kasta oo sax ah ee aan falanqaynta keentay in ay sugaan sano ka badan dhowr laabto Rabbigeenna iyo ka hor waxaan raaligelin.
The jidadka Rabbiga yihiin, oo aan helin, inta badan si unuga!
Haddii aan u leeyihiin in ay sugto sano ee yar waxa ay noqon doontaa mid aad u adag oo aniguna aad fiiro gaar ah u xaqiiqada ah in been ka mid ah kuwa raacsan ee cadowgu Masiixa tahay inta ka badan ay ka soo muuqan, oo waxaan idiin ku yeedhi xagga aragto this video on page blog this: » HALKAN « si aad u hesho fikrad ah magnitude beenta aan u adkaysan Sanooyin on da’da Dhulka.
Brothers Gacaliyayaalow iyo Sisters xagga Ciise Masiix waxaan idiin ku yeedhi xagga dalban buugaagta aan Edilivre laba koob.
Ilaah ha idiin barakeeyo oo aad ku sii midigta iyo jidka dhawrsoonaanta jacaylka, nabadda, cadaaladda, isudanqasho iyo is-hoosaysiinta in aanu ogan Ciise Masiix iyo heynaa isaga by si ay Ilaah.
Waayo, si fiican loo fahmo waxa u sugnaaday aadanaha, waxaan idinka baryayaa inaad akhrido aan article soo laabashada Ciise Masiix September ama October 2016
Iiddii Yuhuudda oo turumbooyin in la qabto on 03 iyo October 4, 2016 waa noo dhan yaabin in wejiga dhulka …. !
Koob Edilivre – APARIS
Bat A, dabaqa 2aad
In ku dhow this article, waxaan ogaaday on television in cabsi uu wali ku dhacay qoysas badan qaraxyada dalka Belgium.
Waxaan halkan marag murugo aan u qoto dheer oo dhaweyneynaa dhammaan walaalahayga aan jeclahayow oo Walaalo ah Masiixa si ay u tukadaan dhibanayaasha iyo qoysaskooda.
Innaba ha maqlina neceb laakiin in falalka Didabadda na fahmaan in argagixisadu ay fuliyaan ay ku laayo, magaca Ilaaha ah waxay Eebe wuxuu ugu yeedhi!
Islaamku waa Diinta of arooryadow iyo ilaa markii la aasaasey Islaamiyiinta hadli hubka Love in gacanta!
Oo waxaad ku tidhaahdaa in Pope ku hayo in Diimaha oo dhan waa run, waxay sidoo kale waa Waddooyinkiisa in Ilaah!
Ha illoobin in mudo ah in Ciise Masiix ayaa sheegay in :
« Anigu waxaan ahay jidka runta iyo nolosha, ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee! «
Ilaah ha idiin barakeeyo.